Idaacadaha kala ah; Daljir iyo SBC, ayaa joojiyay sii daynta Idaacaddan oo si toos ah usoo dhex-mari jirtay FM-yadooda ku yaalla deegaanada Puntland.
Xilliyadii ay sii dayn jireen VOA, waxay ku badaleen barnaamijyo iyo warar kale taasoo ilaa hadda aan war-rasmi ah laga hayn sababta keentay.
VOA oo kamid ah Idaacadaha ugu afka dheer ee ku hadla Af-Somaliga ayaa inta badan tabisay dhacdooyinka kala duwan ee ka dhaca deegaanada Puntland.
Warbaahinta fadhigeedu yahay magaalada Washington ayaa muddooyinkii dambe waraysiyo iyo war-bixino ka diyaarinaysay xaaladda ammaanka, taasoo ay aad u dhibsatay xukuumadda Madaxweyne Gaas.
Lama oga tallaabadan inay ka dambayso xukuumadda Puntland oo waayadan dagaal kula jirtay saxaafadda iyo inuu yahay qorshe lagula xisaabtamayo Madaxda Idaacaddan.
Maamulka Idaacadaha SBC iyo Daljir kama aysan hadlin arrintan oo ay isula dhex-marayeen shacabka Puntland.
Idaacada Radio Garowe oo kamid ah warnaahinta ugu waaweyn ee ka howlgala degaanada Puntland ayaa iyadu qayb ka aheyn go'aankaas labada idaacadood ku joojiyeen baahinta barnaamijyada laanta Af-Somaliga VOA.
Dhawaan ayaa dowladda Puntland, shaqoo joojin ku samaysay TV-ga Universal oo dacwadiisu ka socoto magaalada Garowe kadib markii uu baahiyay riwaayad ka hadlaysa shaqada Madaxda Puntland gaar ahaan Madaxweyne Gaas.
Xiriirka wada-shaqaynayd ee u dhaxeeya laanta Afka Somalia ee Idaacadda Codka Maraykanka iyo xukuumadda Puntland, ayaan wanaagsanayn taasoo keentay in dowladdu awaamiir kala duwan kasoo saartay shaqadeeda.
GAROWE, Puntland- Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamad Cali Gaas oo galabta dib ugu soo noqdey magaalo madaxda Puntland ee Garowe ayaa gabi ahaan saxaafada ka howlgasha magaalo madaxda qaadacdey in ay kaga hortagto garoonka diyaaradaha islamarkaana kas ...